Zvokuita Kana Uri Kumwedzi Murume Achida Rhoji Zvokuita Kana Uri Kumwedzi Murume Achida Rhoji
Toti majaira kuwana rhoji zuva nezuva iwe woenda kumwedzi. Zvinoreva kuti muchaita mazuva mana kana mashanu musina rhoji. Panonetsa ipapo nokuti kuruza ropa kunoitisa zemo.
Ukuwo murume anoita shungu nokuti haasi kukwanisa. Kumukadzi zvinokwanisika kumirira. murume anonetsa. Ini ndoona sokuti dzimwe nguva anofanigwa kubatsigwa kutapudza unga. Zvino zvinoitwa sei?
Maoko: Unokwanisa kushandisa maoko ako kuti murume arhoje maoko. kana wafunga kudaro udza murume kuti unoda kushandisa maoko, wadaro geza maoko nemvura inodziya, woisa mafuta akaita se baby oil mumaoko woona kuti maoko ari kudziya uye ari kusvedzerera, wochimashandisa pamurume kusvika adiridzira. Terera zvaanotaura kuti uzive zvokuita. Unoona zvinhu zvochinja kana oda kudiridzira. Chenjera ipapo nokuti anokwanisa kubudisa zvinosvika kure. Zvinokunetsa kupukuta machira.Urume hunoshamisa kuona huchibida. Kana usina kumbozviona imboita murume wako nemaoko uone. Ndiko ugozoziva kuti kana ari muchitubu anokuiteimo.
Kana apedza, muudzewo kuti kuona zvichibuda kunokufadza. Kana pane zvaabudisa usatya kuzvibata nokutamba nazvo. Muudze maonero ako iwe uye EXCITEMENT yawaita pakuzviona. Next time uri kumwedzi anokuudza maitire aanoda.
Mazamu: Kana une mazamu makuru unokwanisa kuti murume aise chombo pakati iwe wokwiza chombo nemazamu kusvika adiridzira. Asi futi tanga wazora mafuta pamazamu. Chinongonetsa pakudai maitire acho asi kana ukavata nomusana, murume wokutanyanga pachifuva makatarisana, anobva akwanisa kusvitsa chombo pakati pemazamu. Pakudiridzira unosara une zvese zvabuda paari pachifuva nechirebvu chako asi hazvina basa. Taridza kuda (appreciation) zvabuda mumurume wako. Kana uchipukuta murume, usapukuta wakanyarara, taura nokukurudzira nokutaridza rudo.
Kana une mazamu madiki usazama mutowo uyu. Haushandi kuvanhu vane mazamu madiki nokuti havakwanisi kuputira chombo nemazamu.
Makumbo: Kana usinganyanyi kuvhinza, unokwanisa kuti murume aise chombo pakati pemakumbo. Zvichibva nokuti uri mutete zvakadii, kana ukaisa makumbo pamwe chete wakavata nedumbu, murume akavata kumusana kwako akadzikira zvishoma pane zvaanochiita kana achikupinza nokumashure, anokwanisa kuisa chombo pane nyama dzakapfava pfava (very soft skin) anokwanisa kutambapo kusvika adiridza. Pese paanoita pasiri pachitubu panoda kutanga waisa mafuta.
Maitire enyu ndeenyu asi chandinongoda kutaura ndechokuti usarega murume achibuda mumba azere unga. Pota uchitapudza. Uyezve taridza kufarira kuti murume ari kupihwa twake. Ukajaira kumirira kuti akumbire unenge usingaiti basa rako zvakanaka. Murume ndewekutozivisa kuti zvokungovata pasina chaitwa hazvisizvo. Unongobvunza kuti "Tongovata here nhai baba Chimwana? " Kana akada kuti ngativate muudze kuti, "Handina hope, chindipawoka hope ndigovata zvakanaka."
Murume ngaagare ane tariro yeRhoji chero paadira. Iwewo mukadzi ita konifidhenzi yokuziva kuti ukada rhoji unoiwana chete. Mwana asingachemi anofira mumbereko. Kwawakabva sadza raivako, saka hauna kuvinga sadza pano. Chiita zvawakavinga wakasununguka. Nyaya ndeyako numurume wako chete muripo vaviri. Jaira kuti murume atapudzwe urume hwakazara maari. Hazvinetsi kuita uye zvinotonakawo kwauri kupfuura kumurume wako.
Chitubu: Pamwewo murume anoita zemo rokuti anokuti chero uri kumwedzi rega ndipinze. Munokwanisa kuti apfeke kondhomu moita zvichibva nokuti uri kuvhinza zvakadii. Kana wange wava pedo kupedza, zvinokwanisika asi kana uri pakati hazviiti.
Dzimwewo: Regai ndigumire pano Panyaya dzandinoziva asi kune dzimwe nyaya dzinoitwa navamwe. Kune vasikana vamazuvano vanoti kana akasangana nomurume anongoda kuvata naye asi asingapinzwi muchitubu kuitira kuti musi waanoroogwa agohi imhandara. Vanoita zvokupinzwa kumashure chete. Handingakutsananguriri kuti zvinodii pakunaka kwazvo asi Pane umwe wandaimbotamba naye aiti zvinonaka. Ini CONCEPT yacho handisati ndawirirana nayo mumusoro mangu nokuda kwemaBACTERIA ariko uku. Kuti chombo chimwecho chambopinzwako chigozopinzwa kumberi bodo. Ndinomirira hangu three days yacho ipere nditangwe zvakanaka. Maoko ndinawo okubatsira murume.
Asi ndakuudzawo for completeness chete. Read The Complete Article At Mai Chibwe VekwaZimuto.